Taliyihii hore ee bilayska Puntland Gaashaanle sare Nuur Salaad Muuse oo maanta ku geeriyooday Bossaso. – Radio Daljir
Taliyihii hore ee bilayska Puntland Gaashaanle sare Nuur Salaad Muuse oo maanta ku geeriyooday Bossaso.
Bossaso, July 10 – Alla ha u naxariistee taliyihii hore ee ciidanka bilayska Puntland Gaashaanle sare Nuur Salaad Muuse Cali ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Bossaso ee xarunta maamulka gobolka Bari kaddib markii uu in muddo ah uu xanuunsanaa.
Nuur Salaad Muuse Cali, maanta duhurnimadii ayuu ku naf-baxay Isbitaalka Puntland oo ku yaalla xaafadda Laanta-hawada ee magaalada Bossaso halkaasi oo uu in mudda ah ku ahaa bukaan jiif, isla galabtana waxaa lagu wadaa in loo sameeyo aas-qaran oo ay ka qayb-galaan madaxda dawladdu.
Alle ha u naxariistee Nuur Salaad, waxaa uu ka mid ahaa ragga taariikhda dheer iyo tilmaamaha mucayinka ku lahaa deegaannada Puntland qaybta weynna ka ciyaaray dhismihii iyo unkiddii maamulka Puntland ee sannaddii 1998-dii, Soomaaliya-na sidoo kale ku dhex lahaa tariikho la xasuusto ee xagga ciidamada ah.
Muddo dheer ayuu Nuur Salaad ahaa taliyaha ciidanka bilayska Puntland, isagoo sidoo kalena ahaan jiray taliyaha qaybta bilayska gobolka Nugaal dawladihii ay madaxweynayaasha ka ahaayeen C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Cadde Muuse Xirsi, waxaana uu lahaa khibrad ciidan oo durugsan taasoo gundhig u noqoday koboca-ciidan ee Puntland gaar ahaan kuwa nabad-galyada.
Marka la eego taariikhaha lama illaawaanka ah ee lagu xasuusto alle ha u naxariistee Nuur Salaad, waxaa ka mid ah doorkii uu ku lahaa hirgalkii mashruucii lagu dhissayey waddada laamiga ah ee isku xirta gobollada Puntland iyo dekedda magaalada Bossaso, mashruucaasi oo xilligii la wadday uu ka ahaa hoggaanka ciidankii nabad-galyada ee illaalada mashruuca.
Sannadihii ugu dambeeyey Nuur Salaad, waxaa uu ahaa hawl-gab mana qaban wax shaqo dawladeed ah iyo mid u gaar ah toona xanuun la soo darsay awgiisa, waxaana uu ku sugnaa gurigiisa. Toddobaaddo ka hor ayuu Radio Daljir ku booqtay gurigiigsa magaalada Garoowe isagoo siiyey xog-warran dheer oo la xiriirta taariikha deegaannada Puntland gaar ahaan xaaladdu siday ahaan jirtay ka hor intii aan la samayn laamiga iyo dekedda Bossaso.